merolagani - के आणविक शक्तिले ग्यास र तेलको आवश्यकता समाप्त गर्नेछ?
के आणविक शक्तिले ग्यास र तेलको आवश्यकता समाप्त गर्नेछ?
May 04, 2022 10:53 AM Merolagani
इन्धन खपतको सन्दर्भमा विश्व दुविधामा उभिएको छ। जलवायु परिवर्तनको यस युगमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग झन्झटिलो हुँदै गइरहेको छ। पृथ्वी तातो हुँदै गइरहेको छ र विश्वले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन।
यो ऊर्जा संकट रुस–युक्रेन युद्धले थप उजागर भएको छ। रुसको ग्यासमा युरोप कति निर्भर छ? भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ।
सायद त्यसैले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले परमाणु पुनर्जागरणको समय आएको बताएका छन्।
म्याक्रोनले पाँच वर्षअघि परमाणु ऊर्जा उत्पादन एक तिहाइले घटाउने घोषणा गरेका थिए। फुकुसिमा दुर्घटनालाई लिएर फ्रान्ससँगै अन्य धेरै देशले पनि यस्तै मनसाय व्यक्त गरेका थिए तर अहिले विश्वमा परमाणु ऊर्जाप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको देखिन्छ। खासगरी ग्यासको मूल्य बढेको कारण।
रुस–युक्रेन युद्धबाट उत्पन्न ऊर्जा समस्याले यसतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ।
न्यूक्लियर साइन्स अर्थात आणविक विज्ञान र प्रविधि विशेषज्ञ अल्फेर्डो गार्सिया भन्छन् कि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि हामीले युद्धबाट सिक्दैछौं कि हामी अब जीवाश्म ईन्धनमा धेरै निर्भर हुन सक्दैनौं।
जीवाश्म ईन्धनले विश्वको दुई तिहाइ बिजुली र ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन हुन्छ। तर २०१८ मा जीवाश्म इन्धनबाट हुने वायु प्रदूषणले ८० लाख मानिसको ज्यान लियो। यो तथ्यांक हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययनबाट आएको हो।
जुन गतिमा ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले यो वर्ष उत्सर्जन १४ प्रतिशतले बढ्नेछ। यसले यो शताब्दीसम्ममा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम वृद्धिको लक्ष्यलाई पराजित गर्नेछ।
यद्यपि, जीवाश्म इन्धनमा भर पर्ने बिजुली उत्पादन गर्ने यस्तो मोडल अपनाउन सबै सहमत भएको देखिएका छन्।
अब दुईवटा मात्र बाटो छन्, आणविक र नवीकरणीय ऊर्जा।
ग्रीनपीस स्पेनमा इनर्जी एण्ड क्लाइमेट चेञ्जका प्रमुख मेरिटेक्सेल बेनासारले शतप्रतिशत नवीकरणीय र दक्ष ऊर्जा मोडल अपनाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको बताएका छन्। यो सस्तो र पर्यावरण अनुकूल पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
तर, के यस्तो उर्जा पारम्परिक उर्जाको वैकल्पिक श्रोत बन्न सक्छ? भन्ने प्रश्नमा आणविक बिजुलीका समर्थकहरु पनि चिन्तित छन्।
वास्तवमा, नवीकरणीय स्रोतहरूबाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता सीमित छ, यसबाहेक, यसको लागि धेरै ठाउँ र सामग्री चाहिन्छ। साथै, ग्रिडसम्म उर्जा पु¥याउनका लागि मौसममा पनि निर्भर हुनुपर्दछ।
तसर्थ, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको समर्थकहरूका अनुसार, सबैभन्दा व्यवहारिक कदम भनेको आणविक र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन दुवै बढाउनु हो ताकि ऊर्जाको लागि कोइला, ग्याँस र तेलमा निर्भरता पूर्ण रूपमा समाप्त होस्।
तर यो रातारात हुने होइन। किनभने आणविक उर्जा केन्द्र बनाउन र सुरु गर्न पाँचदेखि दश वर्ष लाग्छ।
परमाणु ऊर्जा कसरी उत्पादन गरिन्छ?
आणविक विखंडन एक न्यूक्लियर पावर प्लान्टमा बिजुली उत्पादन गर्नका लागी प्रयोग गरिन्छ।
एक भारी परमाणु विभाजित गरेर (सामान्यतया यो यूरेनियम–२३५ हो) गुणक प्रभावमा थप न्यूट्रोनहरू सिर्जना हुन्छन्। यसले एक सेकेन्डको धेरै सानो अंशमा चेन प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्दछ।
यसले न्यूट्रोन, गामा किरण र ठूलो मात्रामा ऊर्जा उत्पादन गर्छ। यसले गाढा पानीको तापक्रम बढाउँछ र वाफ उत्पादन गर्छ।
त्यसपछि वाफले रिएक्टरको टर्बाइनलाई घुमाउँछ, जसले बिजुली उत्पादन गर्ने जनरेटरलाई सक्रिय पार्छ। यसरी बिजुली तयार हुन्छ र अन्ततः ग्रिडमा जान्छ।
फ्युजनले के हुन्छ?
फ्युजनले ठूलो मात्रामा ऊर्जाको रिलीजलाई बुझाउँछ। वास्तवमा, परमाणु केन्द्रहरू भत्काउनुको सट्टा, तिनीहरूलाई एक ठाउँमा बाँधेर यो प्रक्रिया गरिन्छ।
परमाणु ऊर्जालाई भविष्यको ऊर्जाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ किनभने यसले नगण्य प्रदूषण निम्त्याउँछ। यसले स्रोतसाधन पनि कम खर्च हुन्छ। यसबाट असीमित ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तर यो पृथ्वीमा परमाणु उर्जाको सफल उत्पादनको लागि धेरै उच्च प्रविधि चाहिन्छ र यो अझै विकास भइरहेको छ।
विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि आणविक फ्युजन यस शताब्दीको उत्तरार्धमा सबैभन्दा ध्यान आकर्षित गर्ने मुद्दा बन्नेछ।
यो कत्तिको पर्यावरण अनुकूल छ?
युरोपेली आयोगको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार युरोपेली आयोगले आणविक ऊर्जालाई ‘हरियो ऊर्जा’को रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरूले प्रत्येक घण्टा एक गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्न औसत २८ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छन्, जबकि कोइलाबाट ८८८ टन तेलबाट ७३५ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुन्छ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्दा परमाणु ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाको तुलनामा तीन गुणा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन हुन्छ। अर्थात् ८५ टन ग्रीन हाउस ग्यास। हाइड्रोइलेक्ट्रिक र पवन ऊर्जाले २६ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्दछ। यो सबैभन्दा स्वच्छ ऊर्जा हो।
आणविक शक्तिले निकै कम सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन डाइअक्साइड उत्पादन हुन्छ। यसले एसिड वर्षा निम्त्याउँछ। साथै, यसले रासायनिक फोहोर पनि कम उत्पादन गर्छ। यसले अन्य ऊर्जा उत्पादनको तुलनामा कम खनिज र जीवाश्म ईन्धन स्रोतहरू प्रयोग गर्दछ।
गार्सिया भन्छन् कि परमाणु ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल र सुरक्षित छ। तर, यसमा सबै सहमत छैनन्।
‘यद्यपि आणविक ऊर्जाले ग्रीन हाउस ग्यास त्यति उत्सर्जन गर्दैन, तर यसले प्रति किलोवाटको तुलनामा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्छ,’ बनासारा भन्छन्, ‘आणविक रिएक्टरले बिजुली उत्पादन गर्ने हुनाले यसले ग्रीन हाउस ग्यासहरू उत्सर्जन गर्छ।’
आणविक उर्जाका आलोचकहरुले युरेनियमको उत्खननका कारण वातावरणमा हानी पुगेको बताउँछन्। प्लान्ट बन्द गर्नु महँगो र प्रदूषणकारी छ। यद्यपि, आणविक प्लान्टहरूमा दुर्घटना र सैन्य आक्रमणको धेरै कम जोखिम छ। तर यदि यो भयो भने, यो डरलाग्दो साबित हुन सक्छ।
आणविक इन्धनबाट उत्पन्न हुने आणविक फोहोरको विसर्जन गर्नु जटिल कार्य हो। उदाहरणको लागी, आणविक उर्जा उत्पादनको समयमा, उच्च स्तरको आणविक फोहोरलाई तीन फरक चरणहरुमा भण्डारण गरिन्छ। अन्तिम चरणको फोहोर जमिनभित्र २०० देखि एक हजार मिटर भित्र गाडिन्छ ।
ग्रीनप्रेस कार्यकर्ताहरू भन्छन् कि आणविक उद्योगले यस समस्याको सन्तोषजनक सुरक्षित प्राविधिक समाधान खोज्न सकेको छैन।
के यो आर्थिक रूपमा लाभदायक छ?
आणविक ऊर्जा प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न धेरै महँगो छ।
उदाहरणका लागि, बेलायतको दक्षिणी भाग हिन्क्ले प्वाइन्टमा एउटा आणविक ऊर्जा प्लान्ट निर्माण भइरहेको छ। यसबाट ३ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र सन् २०२५ सम्ममा मुलुकको ऊर्जा आवश्यकताको ७ प्रतिशत पूर्ति हुनेछ। यो एक अनुमान अनुसार ३० हजार मिलियन डलर खर्च हुनेछ।
अर्जेन्टिनामा रहेको अतुचा आणविक ऊर्जा प्लान्टले १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ तर यसको लागत ८ हजार मिलियन डलर हुनेछ।
यद्यपि, परमाणुबाट बिजुली उत्पादन गर्न सस्तो छ किनभने यसलाई ठूलो मात्रामा इन्धनको निरन्तर आपूर्ति आवश्यक पर्दैन।
युरेनियम निकै महँगो भए पनि यसको थोरै मात्राले पनि धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ।
आणविक उर्जा निर्माणमा को छ अगाडि?
अमेरिकामा ९० गिगावाटभन्दा बढी क्षमताका ९६ रिएक्टर छन्, जुन काम गरिरहेका छन्। अमेरिकाले विश्वको एक तिहाइ परमाणु ऊर्जा उत्पादन गर्दछ। त्यसपछि चीन र फ्रान्स छन्। इन्टरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेन्सीको तथ्यांकअनुसार दुवैको हिस्सा १३–१३ प्रतिशत रहेको छ ।
फ्रान्समा ७० प्रतिशत बिजुली उत्पादनमा आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरूले योगदान गर्छन्। यस हिसाबले यो विश्वको पहिलो नम्बरमा छ।
इमानुएल म्याक्रोनले ऊर्जा योजना घोषणा गरेका छन् जसमा ५० हजार मिलियन यूरोको लागतमा छवटा नयाँ रिएक्टरहरू निर्माण गरिनेछ।
जर्मनीले आफ्ना तीनवटा आणविक संयन्त्र बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि युक्रेन र रुसबीचको युद्धका कारण यो अन्योलमा छ।
आणविक उर्जाको मुद्दामा युरोप विभाजित छ। जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, स्पेन, लक्जमबर्ग र पोर्चुगल यसको प्रचारको विरुद्धमा छन्। यी देशहरू बुल्गेरिया, क्रोएसिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, रोमानिया र स्लोभेनियाको स्वयंभू परमाणु गठबन्धनको विरुद्धमा छन्।
ल्याटिन अमेरिकामा बिजुली उत्पादनमा आणविक ऊर्जाले मात्र २.२ प्रतिशत योगदान गर्छ। अर्जेन्टिनामा तीनवटा र मेक्सिको–ब्राजिलमा दुई–दुई रिएक्टर छन्।
तर आणविक उर्जाको हिसाबले विश्वको अर्को महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले आणविक उर्जामा सबैभन्दा बढी दाउ लगाइरहेको छ।
२०१६ देखि २०२० को बीचमा, चीनले आफ्नो परमाणु ऊर्जा उत्पादनलाई दोब्बर बनाएर ४७ गिगावाटमा पुर्याएको छ। यो २०३५ सम्म १८० गिगावाट पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। यो अमेरिकाको हालको परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमताको दोब्बर हो।
(बीबीसी हिन्दीबाट अनुवादित)